Kalandarka dayaxa 2018 | Saadaasha Shabakadda
Sidaan ognahay, dayaxeenu wuxuu leeyahay meerto 28-maalmood dhameystiran. Dayax gacmeedkani wuxuu maraa afar waji marka maalmahan la dhaafo. Wejiyadaha caanka ah waa: cusub, koraya, buuxa oo sii yaraanaya. Maanta waxaan ku tusinaynaa adiga 2018 kalandarka dayaxa leh dhammaan madoobaadka, calaamadaha iyo xoogaa fasiraadda xiddigiska. Waxaan bilaabi doonnaa inaan qeexno kalandarka bisha May ee aan ku jirno oo waxaan tagi doonaa ilaa Diseembar.
Ma rabtaa inaad ogaato taariikhda dhammaan wejiyada dayaxa iyo macnihiisa? Sii wad akhriska 🙂
1 Dayax Bisha May
2 Dayaxa bisha Juun
3 Dayax bisha juul
4 Dayax bisha Agoosto
5 Dayax bishii september
6 Dayax bisha oktoobar
7 Dayax bisha november
8 Dayax bishi disember
Dayax Bisha May
Bishan Maajo ayaan helnay dayaxa rubucii ugu dambeeyay ee bisha Maajo 7 iyo dayaxa cusub ee 15-ka Maajo. Bishan gudaheeda, dayaxu wuxuu noo keenayaa tamar ku filan oo aan ku qaban karno mashruucyo kale oo ma guurto ah, dhaqaale, qoys ama mashruuc dhisme ah. Bilaabidda jimicsiga waa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo taariikhaha ah sidaa darteedna wax badan kama qabanno walaaca.
Qaybta koowaad waxay soo muuqan doontaa Maajo 22 iyo, ugu dambeyntiina, bisha oo buuxda bisha Maajo 29. Calaamaddu waa Sagittarius waxayna na tusaysaa farxad iyo xamaasad dhamaadka bisha. Shaki kuma jiro iyo aaminaad saafi ah ayaa ah waxyaabaha nala socon doona. Markii aan deeqsi ku nahay tilmaam kasta maalintii oo dhan, waxaan helnaa fure u ah laabta tiro badan. Maalinta dayaxa oo buuxa waa ikhtiyaar wanaagsan oo loo qorsheeyo waxqabad isboorti.
Dayaxa bisha Juun
Bisha Juun, kuleylka sareeya iyo bilowga xagaaga xagaaga ayaa marba marka ka dambeysa soo gaara. Waxaan yeelan doonnaa eRubuc-dii ugu dambeeyay 5-ta Juun iyo dayaxa cusub ee 13-ka Juun. Calaamaddu waa Gemini. Xeeladaha loo adeegsado isgaarsiinta waxay naga caawin karaan inaan gaarno dadka kale oo aan isu muujino sidaan nahay. Waa inaan si taxaddar leh u qiimeyno duruufaha aan ku jirno oo aan barano luqadaha ama aan bilowno daraasado cusub. Dayaxdani waxay diyaar u tahay inay wax ku qaadato shactiro.
Dhinaca kale, waan yeelan doonnaa rubuca hore ee 20-ka Juun iyo dayaxa oo buuxa 28-ka Juun. Calaamaddu waa Capricorn. Dayaxa taariikhahaani waa mid wax dhisaya, shaqo badan, urursan oo la huray. Dhammaan tamarta aad u leedahay inaad dhibaatooyinka la tacaasho oo aad xalliso way yaraanaysaa. Ha ka tagin shaqada badh la qabtay. Dunidaada shucuurta ayaa xoogaa la joojin doonaa.
Dayax bisha juul
Bartamaha xagaaga, bil fasax ah dad badan, waxaan haysan doonnaa rubuc-dhamaadka 4-ta Luulyo iyo bisha cusub ee 12-keeda. Waxaan ku arki doonnaa qorrax madoobaad qayb ahaan calaamadda Kansarka. Maalmahan qaar baa aad u kicin kara. Waa muhiim in la ogaado nafteena iyo in la ogaado cidda aan nahay iyo waxa aan raadineyno. Jawigayaga aasaasiga ahi wuxuu inaga dhigi karaa inaan is-aqoonsanno oo aan aragno in waxyaabo aannu u malaynay inaanay innagu lahayn. Aad ayey muhiim u tahay inaad naftaada daacad u ahaato wax kasta oo aan innagu jirinna waxay xireysaa marxaladda nolosheena.
El Waxaan heli doonnaa rubuca koowaad ee 19-ka Luulyo iyo dayaxa oo buuxa 27-ka Luulyo, oo ay weheliso wadarta dayax madoobaadka ee Aquarius. Maalmahan sidoo kale way sii adkaan doonaan. Su'aalaha aasaasiga ahi waa inay noo horseedaan inaan ka gudubno xadkaas xorriyadda. Waxaan isku arki karnaa dano kala duwan, kalgacal furfuran iyo dareen fudeyd badan. Waxaa laga yaabaa inaan ka go'no sidii caadiga ahayd, jir ahaan iyo maskax ahaanba. Tani waa wax iska caadi ah jawi kulul, fasax, iyo jawi deggan.
Dayax bisha Agoosto
El Rubuca ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa Agoosto 2 dayaxuna wuxuu di'i doonaa 11-ka Agoosto oo leh qorrax madoobaad qayb ahaan. Calaamaddu waa Leo. Maalmahan waxba kama faa'iidi doonno innagoo aan geesinnimo iyo shakhsiyan u adeegsan arrimaha. Waxay noogu sheegaan deegaankeena ayaan u adeegi doonin inay gaaraan go'aamo muhiim ah.
El rubuc soo-baxa ayaa iman doona Agoosto 17 iyo dayaxa oo buuxa 26 calaamadda Pisces. Waqtiyadan, khiyaaliga, riyada iyo garashada ayaa naga caawiya inaan sii wadno maalin kasta. Sidoo kale xad-dhaafka iyo daroogooyinka ayaa ku siin kara ka-goyn khasab ah. Iska ilaali iyaga. Maalmahan kulul waxaan aad ugu nugul nahay in la khiyaaneeyo ama nalagu dhaqmo. Si kastaba ha noqotee, waan ka fogaan karnaa tan haddii aan xiriir la sameyno dadka noo sheegaya in nalagu faray ama nala khiyaaneeyey. Ka faa'iideyso maalmahan maxaa yeelay wuxuu noqon doonaa mid naxariis badan kuwa kale iyo hal-abuurnimo.
Dayax bishii september
Bishan ayaa dhici doonta rubuca ugu dambeeya 1-da iyo dayaxa cusub 9-ka calaamadda Virgo. Sebtember waxaa weheliya waxyaabo caadi ah, diiqad, jahwareer ka dib fasaxa, iwm. Caadadan waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo la sameynayo hagaajin yar. Markaan dalbanno kan ugu yar, waxaan ku xasillooneyn karnaa kuwa waaweyn. Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo si loogu jiro khalkhal maskaxeed.
El Rubuca hore wuxuu noqon doonaa 16-ka iyo dayaxa oo buuxa 25-ka calaamada Aries. Cimilada ayaa noqon doonta mid waxqabad, waxqabad iyo shaqsiyeed. Maalmahan waa inaan dhaqaaqnaa waxayna ku fiicnaan doontaa inaan wax bilowno. Waxaa jiri kara jawi qalalaase gaar ah. Si loo baabi'iyo, waxaa fiican in lagu tababaro isboortiga banaanka.
Dayax bisha oktoobar
Bisha Oktoobar heer kulku wuu bilaabmaa hoos ayuu u dhacayaa waxaanan salaamaynaa dayrta Dayaxa sii yaraanaya ayaa iman doona Oktoobar 2 oo buuxi 9 calaamadda Miisaanka. Waxaan yeelan karnaa xiriir jacayl ama sasabasho. Nidaamkaaga caadiga ah waxaa laga yaabaa inuu buuxiyo ficillo lagu farxo.
El Saddexda bilood ee hore waxay noqon doontaa Oktoobar 15 halka dayaxa oo dhammuna uu noqon doono Oktoobar 24. calaamadda Taurus. Dayaxa aan heli doonno maalmahan wuxuu lahaan doonaa raaxo badan iyo jinsi. Arrimaha muhiimka ahi waxay noqdaan kuwo khuseeya, xagga cuntada, nasashada iyo baahiyaha dhaqaale. Waxaan dooneynaa inaan sameyno waxa aan dooneyno oo aan yeelanno waxyaabo waalan.
Rubuca ugu dambeeya wuxuu dhici doonaa Oktoobar 30.
Dayax bisha november
Dayaxa cusub ayaa galaya bisha Nofeembar 7deeda calaamada Scorpio. Waxaa jiri doona xoog badan wadada dhexdeeda cabsidayaduna way sii kordheysaa. Waa muhiim in la aqoonsado kuwa ugu cufan shucuurta.
El Rubuca hore wuxuu noqon doonaa 14-ka iyo dayaxa oo buuxa 23-ka calaamadda Gemini. Wax kasta oo aamusnaa markasta, ayaa dayaxu fasaxayaa. Deymaha aan ku leenahay ragga, kuwa is jecel, asxaabta, iwm. Waa in la dejiyaa.
Rubuca ugu dambeeya waa 29aad.
Dayax bishi disember
Waxaan sanadka ku xireynaa a dayax cusub December 7 ee calaamadda Sagittarius. Waa xilli aan khatar gelin karno maadaama aan yeelan doonno kalsooni iyo xoog. Waan guuleysan karnaa dagaalada.
El Rubuca hore wuxuu noqon doonaa 13-ka iyo dayaxa oo buuxa 22-ka calaamadda Kansarka. Waxaa jiri doona isbeddelo jawiga oo ah dayax-biyood. Waxaan dareemeynaa dhaawac, xasaasi waxaanan yeelan doonaa awood dheeri ah oo xiriir iyo soo bandhigid kalgacal. Waa inaad kordhisaa heerka garaadka.
Rubuca ugu dambeeya waa 28aad.
Macluumaadkan waxaad ku raaxeysan doontaa dayaxa dhammaan wejigiisa dhammaan sanadka 2018.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Kalandarka dayaxa ee sanadka 2018
Kuma ayuu ahaa Alfred Wegener?
Biomass, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tamartaan dib loo cusboonaysiin karo